Chii chinonzi VPN? Unosarudza Sei Imwe? | Martech Zone
Chipiri, July 14, 2020 China, July 16, 2020 Douglas Karr
Kwemakore, ndaifunga kuti kuva nehofisi kwaive kudyara kwakanaka… zvaipa vatengi vangu pfungwa yekuti bhizinesi rangu raigadzikana uye rakabudirira, raipa vashandi vangu nemakondirakiti nzvimbo yepakati, uye chaindidadisa.
Chokwadi chaive chekuti vatengi vangu havana kushanyira hofisi uye, pandakaderedza runyorwa rwevatengi vangu uye ndikawedzera kuburitswa kweumwe neumwe, ini ndaive ndakawedzera onsite uye hofisi yangu yakagara isina chinhu nguva zhinji. Icho chaive mubhadharo… nzvimbo yehofisi inodhura zvakanyanya kupfuura mogeji.
Ini zvino ndoshanda pakati penzvimbo dzekushandira pamwe, nhandare dzendege, mahotera, zvitoro zvekofi, uye onsite nevatengi vangu. Mumwe wevatengi vangu akatondipa yangu chiteshi kuti ndishande kunze.
Nepo vatengi vangu vachichengetedza hutano hwakavharika kuruzhinji, izvo hazvina kufanana nenzvimbo dzekushandira pamwe nezvitoro zvekofi. Icho chokwadi ndechekuti mazhinji eaya akagovaniswa maratidziro akavhurika zvekuzeya. Nechirevo uye zvivakwa zvepfuma zvandinoshanda zuva nezuva, ini handigone kuisa panjodzi yekutaurirana kwangu kuvhurika kuruzhinji. Ndipo pane Virtual Yakavanzika Networking inouya yekutamba.
A VPN, kana virtual private network, mugero wakachengeteka pakati pechishandiso chako neinternet. VPNs dzinoshandiswa kuchengetedza yako yepamhepo traffic kubva mukunyepedzera, kupindira, uye kudzvinyirira. VPNs dzinogona zvakare kuita sevamiririri, dzichikubvumidza iwe kuvhara kana kushandura nzvimbo yako uye kusefa pawebhu zvisina kuzivikanwa kubva chero kwaunoda.
Kuti uwane kufamba kwakadzama kweiyo VPN, unogona zvakare kuda kuongorora chidzidzo cheSurfshark, Chii chinonzi VPN?
Sei uchishandisa VPN?
Nekuona kuti zvese zvepaInternet kutaurirana zviri zviviri zvakanyorwa uye zvakagadziriswa kuburikidza nedzimwe nzvimbo, pane zvakawanda zvakanaka pakushandisa Virtual Private Network:
Viga IP yako uye nzvimbo - Shandisa VPN kuviga yako IP kero uye nzvimbo kubva kunzvimbo dzekuenda uye hackers.
Encrypt kubatana kwako - Akanaka maVPN anoshandisa yakasimba 256-bit encryption kuchengetedza yako data. Bhurawuza kubva kuWi-Fi hotspots senge nhandare dzekombi uye nemakamuri uchiziva mapassword ako, maemail, mapikicha, data rebhangi uye rumwe ruzivo rwakashata harugone kutorwa
Tarisa zvirimo kubva chero kupi - Fambisa ako ese mafirimu uye mafirimu mukutsva-nekukurumidza HD pane chero chishandiso. Isu takagadziridza netiweki yedu kuti ipe akanyanya kumhanya pasina miganho yemuchadenga. Dhawunirodha chero chinhu mumasekondi, uye vhidhiyo yekutaura uine mashoma buffering.
Vhura mawebhusaiti akaongororwa - Nyore vhura masosi uye masevhisi senge Facebook, Twitter, Skype, Youtube, uye Gmail. Tora izvo zvaunoda, kunyangwe iwe ukaudzwa kuti hazviwanikwe munyika yako, kana kana iwe uri pachikoro kana muhofisi network iyo inotitadzisa kuwana
Hapana kuongororwa - Mira kuongorora nehurumende, network mamaneja, uye yako ISP.
Iko hakuna geolocated kunongedza - Nekuvanza yako IP kero uye nzvimbo, ExpressVPN inoita kuti zviomere nzvimbo uye masevhisi kubhadharisa mitengo yakakwira kana kuratidza kushambadzira kwakanangwa kunoenderana nenzvimbo. Dzivisa kuwedzerwa mari yezororo kana yeinternet odha.
Nekuti iyo VPN inovanza yangu IP kero uye nzvimbo, iyo zvakare inondipawo ini neyakanaka nzira yekuyedza vatengi vangu 'saiti kuona isingazivikanwe vashanyi vari kuwana yakakodzera mushandisi ruzivo.
Ungasarudza sei VPN
Haasi ese eVirtual Private Network masevhisi akagadzirwa akaenzana. Pane zvikonzero zvinoverengeka zvekusarudza imwe pamusoro peimwe. Nemazana evanozvipa zvakasiyana, kuverenga a Tunnelbear ongororo uye kusarudza iyo chaiyo zvinoreva kuwana chiyero chakakodzera pakati pemasevhisi, nyore kushandisa nemitengo.
Nzvimbo Dzenharaunda - Paunosvika paInternet uchishandisa VPN, mapakeji ese e data anouya kubva kure server kune komputa yako kana nharembozha inofanirwa kupfuura nemaseva eVPN mupi wako. Kuti uite zvakanyanya, sarudza VPN yePC ine maseva kutenderera pasirese. Ehezve, zvipikirwa zveVPN nezvekusvika pasirese hazvivimbise kuita kwakanakisa, asi chiratidzo chakakosha chekuti zvivakwa zvemupi mupiro zvave kumberi uye zvinokwanisa kuburitsa mashandiro epamusoro.
Bandwidth - Mabhizinesi mazhinji emabhizinesi anopa VPN yemukati. Kana ivo vaine yakawanda bandwidth, izvo zvinonakidza. Zvisinei, kushanda neVPN iyo isina simba kunononoka munhu wese akabatana nayo kukambaira.
Tsigiro Yekushandisa - Kugadziriswa kweVPN kwaimbove kunorwadza, asi masisitimu emazuva ano anoshanda akabatanidza kugona kweVPN. Ita shuwa kuti urikushanda neVPN sevhisi ine zvese desktop uye nharembozha.
zvakavanzika - Iwe unofanirwa kugara uchiziva zvechokwadi kuti mupi wako haatore kana kugovana ruzivo rwako uye haatarise zvaunoita. Ramba uchifunga kuti vimbiso yekuvanzika kwazvo uye zero zerojenari hazvireve kuti zvinoitika zvechokwadi. Mumakore mashoma apfuura, pakave nezvakawanda zvinonyadzisa pane network. Zvinokurudzirwa kusarudza VPN yePC kubva kune mupi ane mahofisi makuru kwete muEurope kana America.
havukavu - Pamusoro maVPN anodzivirira kuvanzika kwako, asi anotendera iwe kuti uenderere mberi uchiita zvaunofarira online, kusanganisira kuona emhando yepamusoro mavhidhiyo, kutamba mitambo yepamhepo, kubhurawuza webhu, uye kudzidza zvakawanda nezve zvigadzirwa zvehunyanzvi. Usatenda kushambadza. Gara uchitarisa online ongororo uye ita zvako bvunzo. Paunenge uchiyedza iyo VPN sevhisi kumhanya kwekombuta, kuitisa bvunzo dzinoverengeka panguva dzakasiyana dzezuva.
mutengo - Iwe unofanirwa kuve wakagadzirira kushandisa imwe mari kushandisa yakanakisa VPN. Mahara emahara masevhisi anogona kuve akakodzera kune-kamwe-nguva kushandiswa, asi ivo vanosiya zvakanyanya kudikanwa kana zvikashandiswa zuva nezuva. Mahara maVPN eWindows uye Mac makomputa anowanzo kuve nemabatiro akaomarara kana kumhanyisa kumhanya. Nhau dzakanaka ndedzekuti vazhinji vanopa VPN maPC anotendera iwe kuyedza sevhisi, kuongorora mashandiro ayo, uye kana chimwe chinhu chikatadza, iwe unozowana mari yekudzoserwa.
Vatengi 'uye zvehunyanzvi wongororo zvinogona kubatsira kana uchisarudza pakati pezvakawanda zvakafanana zvakafanana zvinopihwa. Zvimwe zvezvinhu zvakakosha zvikuru zvinoona kuti sevhisi yeVPN yakanaka kana kuti yakaipa inozoonekwa chete mushure memavhiki nemwedzi yekushandisa. Tarisa zvayakanakira nezvayakaipira, uye uve akatsoropodza. Iko hakuna 100% sevhisi yakakwana, asi iwe uchiri kufanira kusarudza yakakodzera kwazvo nekuti maVPN ari ramangwana tekinoroji.
Ndasarudza ExpressVPN nekuti ine 160 sevha nzvimbo munzvimbo dzese makumi mapfumbamwe nematanhatu, inoshandisa 94-bit encryption, ine maapplication anogadzirisa nzvimbo yako, uye ane mitengo yakanaka uye rutsigiro. Pandinongovhura Mac yangu kana kubatanidza kunetiweki pane yangu iPhone, ini ndinoona iyo VPN ichibatana uye ini ndasimuka uye ndomhanya! Ini handifanirwe kuita chero chinhu kugadzirisa kana kubatanidza chero nguva… zvese zvoga zvoga.
Tora Mazuva makumi matatu mahara ne ExpressVPN
Kuzivisa: Ini ndinowana mazuva makumi matatu emahara eExpressVPN kumunhu wega wega anosaina.
Tags: ExpressVPNzvideotunnelbearvirtual private networkVpnchiichii chinonzi vpn